स्वेच्छिक आवेदन फारम कतिले भरे र कहिले पाउँछन् खोप ? - Akhabarpati.com
स्वेच्छिक आवेदन फारम कतिले भरे र कहिले पाउँछन् खोप ?
४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको पहिलो डोज खोपका लागि स्वेच्छिक आवेदन फारम भर्न आह्वान गर्‍यो । हालसम्म खोप नलगाएका १८ वर्ष र सोभन्दा माथिका व्यक्तिहरुलाई फारम भर्न आव्हान गरिएको थियो ।